အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုအမေရိကန်သို့ kibble ခွေးထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသို့ပို့လိုက်သည်
ဒီလမှာအမေရိကမှာရှိတဲ့ဖောက်သည်တွေကိုအပြည့်အဝအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကိုပို့ပေးပါတယ်,သူသည် kibble အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်အပြည့်အဝအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်, ဒီ kibble အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးခွေး၏ကျန်းမာရေးအတွက်အစားအစာတန်းဖြစ်သည်။ ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာဖော်မြူလာများထဲသို့မတူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည်။: ဂျုံမှုန့်, ပြောင်းဖူးမှုန့်, ပြောင်းဖူး, ငါမုန့်ညက်ပါ, လတ်ဆတ်သောအသား, အရိုးမှုန့် (သို့) ငါးမှုန့်။ ရေဖြည့်တင်းမှုနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာလုပ်ငန်းများတွင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ယူခြင်းသဘောတရားကိုတိုးမြှင့်လိုက်သည်.
ဒီလမှာအမေရိကမှာရှိတဲ့ဖောက်သည်တွေကိုအပြည့်အဝအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကိုပို့ပေးပါတယ်,သူသည် kibble အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်အပြည့်အဝအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်, ဤ kibble အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည်ခွေးကျန်းမာရေးအတွက်အစားအစာအဆင့်ရှိသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်.
ဒီ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာဖော်မြူလာသို့အသုံးပြုနိုင်သည်: ဂျုံမှုန့်, ပြောင်းဖူးမှုန့်, ပြောင်းဖူး, ငါမုန့်ညက်ပါ, လတ်ဆတ်သောအသား, အရိုးအမှုန့်သို့မဟုတ်ငါးမုန့်ညက်. ထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီနှင့်ဓာတ်သတ္တုများအပြင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်, အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ ဗီတာမင်များနှင့်အရသာကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ အဆင့်မြင့်ထုတ်ယူခြင်းသဘောတရားသည်ရေနေအစာနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာလုပ်ငန်းများတွင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ။.
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပြင်ဆင်ခြင်း→ရောနှောခြင်း→သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး→ extrusion →သယ်ဆောင်ရန်→ခြောက်သွေ့ခြင်း→ဆီဆေးသွင်းခြင်း→အရသာ→အအေး→စစ်ဆေးခြင်း→ထုပ်ပိုးခြင်း
1. အစားအစာရောစပ်စက်: ပြောင်းဖူးမှုန့်စသည့်ကုန်ကြမ်းများသို့ရေအချိုးအစားပေါင်းထည့်ပါ, ဆန်မှုန့်, ပဲပိစပ်, အသားမုန့်ညက်, စီရီရယ်၊, ထို့အပြင်, စသည်တို့, နှင့်ကောင်းစွာရောမွှေပါ.
2. အစာကျွေးခြင်းစက်: အဆိုပါမော်တာဝက်အူသယ်ဆောင်အတွက်အသုံးပြုသည်, နှင့်ရောနှောကုန်ကြမ်းအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအစာကျွေးသေချာစေရန် extruder ၏နို့တိုက်ကျွေးရေး Hopper မှပါးနေကြသည်.
3. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ extruder: မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဝက်အူ extrusion ၏အခြေအနေများအောက်မှာ, ကွဲပြားခြားနားသော feeds တွေကိုဖြစ်စဉ်ကိုညှိခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်.
4. ကုန်တင်: အစာကျွေးခြင်းကိုမီးဖိုပေါ်တင်ပြီးချိန်ညှိပါ. အတွင်းပိုင်းမှာထည့်သွင်းထားသောအမှုန်များ၏အစိုဓာတ်ကိုလျှော့ချရန်သံမဏိနှစ်ထပ်အလွှာအိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အဆိုပါရင့်ကျက်မှုနှုန်းမြှင့်တင်ရန်, နှင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်
5. အလွှာစုံမီးဖို: မီးဖိုအများစုလျှပ်စစ်မီးဖိုသည်, အပူချိန်အကြားဖြစ်ပါတယ် 0-200 ဒီဂရီ, တိကျသောအမှုန်အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္theာန်ကိုထိန်းချုပ်သောကက်ဘိနက်မှပြောင်းလဲနိုင်သည်.
6. ရာသီလိုင်း: အဆိုပါရေနံမှုန်ရေမွှားမှုန်ရေမွှား, phagostimulants, စသည်တို့. ရာသီပြွန်မှာရှစ်ထောင့်ရှစ်ပြွန်ပါရှိသည်, ဆလင်ဒါ, တစ်ခုတည်းစည်ရုတ်သိမ်းရေး, နှစ်ဆစည်ရာသီလိုင်း, output နှင့်ထုတ်ကုန်သဘောသဘာဝ configuration ကိုအရသိရသည်, အစာကျွေးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အမဲဆီဖြန်းသည်, နှင့် minced အမဲသားနှင့်နံ့သာမျိုးကိုလေပေါ်မှာပ.
7. အအေးနှင့်သယ်ဆောင်: ကြော်နှင့်အစာကျွေးခြင်း၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချပါ, အဆီ၏ solidification မြှင့်တင်ရန်, အမှုန်များ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချ, ထုပ်ပိုးလွယ်ကူချောမွေ့.
8. တုန်ခါနေသောဆန်ခါ: ပိုလျှံဖြန်းထားသောပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ကြမ်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်ယခုနှစ်အကုန်ထွက်ရှင်းပေး.
9. ထုပ်ပိုးစက်: လက်စွဲတံဆိပ်ခတ်စက်နှင့်အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်.